बा ले पनि अन्य साथीकाले जस्तै मलाई जान नदिन भएभरको प्रयास गर्नुभयो । स्कुलतिर दादागिरी गर्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, बा ले भान्जा भन्ने, उहाँलाई गुहार्न जानुभएछ बा, अन्य उपायहरूले काम नगरेपछि, भन्नुभएछ “भान्जा, मेरो छोराको खुट्टा भाँचिदेउन, भाँचिएको खुट्टा त सन्चो हुनेछ तर नेपाल गएर जिउँदै आउँछ कि नाई’ । त्यसपछि त झन आपत मलाई, लुकेर हिड्नु पर्ने भयो ।
उपचार नपाएर दाइको मृत्युु
म जान्ने हुँदा हाम्रो घर हरूवा र चरूवा सहित अन्नपात बेचबिखन गरेर ऐश आराम साथ चलेको जस्तो लाग्दथ्यो । खेत बाढीले लगिदिएपछि दुर्दिन सुरू भयो । म, दाइ (दुई, दिदी, बा, आमा र हजुरआमा सात जनाको परिबार थियो । म जान्ने भैसकेपछि बैनि बिमला जन्मी । दाइहरू र दिदी को स्कुल जान बन्द भयो । २०२९ को खेती लाउँदै गर्दा सानदाइ बिरामी हुनुभयो रगतमासी परेर । केही समयपछि श्रावण महिनामा औषधी उपचार नपाएर नै मृत्यु भयो (मेरो बिचारमा) । बा ले जडिबुटी र चित्रेडाँडाको वैद्य कहाँबाट औषधी ल्याइ सकेर लागेपुगेसम्म उपचार गर्नुभएको थियो । ५ कक्षा पास गर्नुभएको, १४ बर्षको हुनुहुन्थ्यो । सानदाइ स्वर्गीय भएपछि बा धेरै नै पुत्रसोकमा पर्नु भयो । ठूलोदाइ कान्छोबालाई लिन मधेस गै लिएर आउनुभयो र कान्छो बाले नै दाइको काजकिरिया गर्नुभयो । त्यसपछि बा लामोसमय हराउनु भयो । सोहि असोजमा भाइ शिव जन्मियो । बालाई २ भाइ छोरा भान्सामा देखाउन हजुरआमा, दाइ र रक्साहा बुबाको बल र करले लामाचौर मुरारी दाइसँगै उहाँकै घरमा (माझघर लक्ष्मण दाइ, भिरबारी केशब दाइ र नसपाते केशब समेत) सोहि माघमा ७ बर्ष पुग्दा नपुग्दै मेरो बर्तन भयो । दाइले गायत्रीमन्त्र सुनाउनु भयो । त्यसपछि बालाइ खोज्न दाइ जानुभयो र १५ र २० दिनमा लिएर आउनुभयो ।
रूपैयाँ, पैसा जोगाडतिर
घरको र परिम तिर्न त मेला गएको थिएँ । तर मजुरीमा गएको थिएन । पहिलोपटक चिलाउनेको झ्याङ झार्ने र बोकेर खेतमा लगि थुपारेर राख्ने काममा गएँ । दुई रूपैया दिनको मजुरी पाइन्थ्यो । रूख चढ्न रङ्गनै मान्थेँ । सायद चढननसक्ने रूख थिएन होला तेतातिर, तेसबेला । दशदिन गएछु । पहिलो आफै परिश्रम गरेर बिस रूपियाँ हात पारेँ । पछि दाइसँग आली खन्न पनि जाने गरेँ, रू.५ र पाईन्थ्यो । दिन बिताउनै गाह्रो हुन्थ्यो कम्मर दुखेर । एउटा हिउँदमा अमिलो अधियाँ पेलेँ । १२ माना मेरा भागमा परेको थियो । मधेस कान्छो बा को घर आइ गाउँकालाई बेचेँ । रू.१० रमानाको परेको थियो । हाम्रो घरमा गाई, भैंसी, गोरू त पालेको थियोे तर बाख्रा थिएन । एउटा बाख्राको पाठी ल्याएर अधिया पालेँ पहिलोपटक एउटामात्र पाठो पायो । हुर्काएर बेचियो र बाँडियो । दोस्रोपटक पाठापाठी पायो । पाठो दिएर पाठी आफ्नै बनाएर पालेँ । फेरि पाठोमात्र पाएर केहिदिनमा के रोग लागेर माँउ मर्याे । पाठो भैँसीको दूध ख्वाएर हुर्काउन पर्याे । मेरो भागमा परेको पाठीले पनि एक पाठो पायो तर बा ले आफ्नो (लामा धामी को) देउतालाई भाकल गरिदिनु भयो । मैले जोतीसकेपछि बा ले पुन बर्तन गर्दिए पनि जोत्न छोडीन । बा ले गोरू किनी सक्नुभएको थियो । मलाई खन्न भन्दा जोत्न नै सजिलो लाग्थ्यो । माथि उल्लेखित प्रसङ्गहरू जोत्नुभन्दा अगाडिका हुन् । २०३८ को मकै छर्ने देखि घरको रोपाई सकि, परिम तिरी १२ दिन मजुरीमा लगेँ । रू.१० र हलगोरूको थियो । रू.१२० र ले मलाई त्यतिबेला जडौरी(पैन्ट, जुत्ता पहिलोपटक) कपि, कलम, फिस छेलोखेलो नै भयो भन्दा हुन्छ ।
बासँग भयङ्कर भिडन्त
अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौं)को छैटौं अधिबेशन २०३८चैत्र १० र १२ सम्म काठमाडौंमा हुने निर्णय भएछ । अनन्तः मरासिनी, टेक प्र.देबकोटा लगायतका विद्यार्थी नेताहरू तानसेनबाट मपढ्ने स्कुलमा आउनु भयो र उक्त युनियन समर्थक विद्यार्थीहरूको भेला गराउनु भयो । उक्त भेलाले मेरो अध्यक्षतामा प्रा.क.सौभाग्य मा.बि.चिदिपानी पुनर्गठन ग¥यो । केन्द्रीय अधिबेशनका प्रचारप्रसार सामाग्री र सहयोग रसिद छोडेर, अधिबेशनमा जान निम्तो दिएर जानुभयो । सबै तयारी पूरा भयो । फाल्गुनको पहिलो हप्तामा हाम्रो फेदीमा रहेको देशभक्त युबा क्लबको समन्वयमा हाम्रोतिरका धेरै नै विद्यार्थीहरूको भेला भयो र सबैजसो साथीहरू सहित म पनि उक्त अधिबेशनमा जाने निर्णय भयो । जाने अन्तिम दिनसम्ममा कुनै पनि साथीहरू जाने हुनुभएन,घर परिबारको दबाबमा। म जाने नै अडानमा रहेँ।जि.क.ले मलाई पर्यबेक्षक रूपमा लाने निर्णय गरेछ, प्रतिनिधि भएको भए खर्च जि.क.ले नै खर्च ब्यहोर्ने रहेछ । खर्च मैले नै जुटाउनु पर्ने भयो । बा ले पनि अन्य साथीकाले जस्तै मलाई जान नदिन भएभरको प्रयास गर्नुभयो । स्कुलतिर दादागिरी गर्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, बा ले भान्जा भन्ने, उहाँलाई गुहार्न जानुभएछ बा, अन्य उपायहरूले काम नगरेपछि, भन्नुभएछ “भान्जा, मेरो छोराको खुट्टा भाँचिदेउन, भाँचिएको खुट्टा त सन्चो हुनेछ तर नेपाल गएर जिउँदै आउँछ कि नाई’ । त्यसपछि त झन आपत मलाई, लुकेर हिड्नु पर्ने भयो । खर्च कसरी जुटाउने चिन्ता त छँदै थियोे ।“खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’, “तँ आँट म पु¥याउने छु“ भने झैं मेरो भागमा परेको, पाठो बा ले भाकल गरिदिनुभएको बाख्रो मेरो प्रिय साथी जनक बस्यालजीले रू.१२० र मा किनीदिनुभयो र बाटा खर्चको समस्या समाधान गरिदिनु भयो । मित्र जनकजीप्रति आजसम्म पनि म आभारी छु । बाटा खर्चको जोगाड भैसकेपछि म स्कुलमा जाँदा आउँदा भूमिगत जस्तै गर्दै अधिबेशनमा जाने दिनको प्रतिक्षामा बसेँ । मेरो आजसम्म पितृदेबताको रूपमा प्रतिरक्षा गरिरहनु हुने बा को मैले तत्कालीन अबस्थामा अल्प जोस र अल्पबुद्धिले हृदयमा चोट पुर्याएकोमा क्षमा याचना गर्दछु ।
नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको भ्रम र यथार्थ
वामपन्थीहरुको विचार बोकी हिड्ने सर्वहारा डा. गोविन्द केसीको माग पुरा…
‘मार्क्सवाद’लाई तथाकथित मार्क्सवादीहरुबाट जोगाऔँ
मार्क्स र मार्क्सवादलाई मार्क्सकै अनुयायी/उत्तराधिकारी भनिनेहरुबाटै बदनाम गर्ने, भ्रष्टीकरण गर्ने,…
पशुपालन व्यवसाय : राज्य र किसानले बुझ्नुपर्ने कुरा
चरकको आइसियू र पत्रकारीताको चुनौती
लोकतन्त्र दिवसमा के भन्छन आर.के त्रिपाठी बेलायतबाट ?
नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका भ्रम र त्यसको निराकरण